Fisaorana alahadin'ny mpitandrina
Accueil Ny Mpitandrina Samihafa Fisaorana alahadin'ny mpitandrina
Ry havana malala ao amin'ny Tompo
Maneho fankasitrahana feno anareo izahay tamin'ny fanehoanareo fitiavana sy vavaka ho anay tamin'ny alahady faha-6 martsa lasa teo.
Feno tokoa ny fonay ary tsy hainay ny hangina manoloana ny fitiavanareo. Koa dia manandratra ny vavaka fisaorana an'Andriamanitra izahay noho ny aminareo, sady angatahanay mba ho tehirizin'ny Tompo ao ambany fitahiany isan'andro ny tafo Melun, ianareo isan-tokantrano sy isam-batan'olona ary isan-tsampana.
Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo sady hanonitra fitahiana manana amby ampy ho setrin'izay nolanianareo.
“Misaotra an'Andriamanitro amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, … ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin'ny andron'i Jesosy Kristy” Filip.1.3-6
Pasteur Solo sy Justine Andrianomenjanahary mianakavy